HomeTareenka dhakhso ah
Tareenka xawaaraha sare ku socda, tareenka xawaaraha sare leh iyo wararka tareenka xawaaraha aad u sarreeya, Xaraashyada HAT iyo natiijooyinka qandaraaska
Natiijooyinka ka soo baxa wararkan waxaa qoray akhristeyaasheena Göksel Genç. Balan qaadkii dawlada ee ahaa in rarka lagu rari doono tareen ayaa sidoo kale la sheegay. Magacyada xisbiyada mucaaradka waxaa laga codsanayaa inay wax ka qabtaan dhibaatadan. [More ...]
Rakaabka doonaya inay ku safraan tareen xawaare sare ah meel uma heli karaan xitaa haddii ay rabaan inay tikidhada iibsadaan maalinta ka horreysa. Muwaadiniinta doonaya tikidhada waa inay si dhaqso leh u dhaqmaan sida tareenka! Maxaa aayar aayar u socda [More ...]
Aqoon isweydaarsiga oo cinwaan looga dhigay “Tareenka Xawaaraha Sare ee Udhaxeeya Ankara iyo Istanbul oo lagu abaabulay taageerida Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Düzce iyo iskaashiga Golaha Magaalada Magaalada Düzce waxaa lagu qabtay Hoolka Shirarka Düzce TSO. Aqoon isweydaarsi, Afhayeenka Golaha Düzce TSO [More ...]
Kala wareejinta Rakaabka Aan Joogtada ahayn Inta Udhaxeysa Labo Tareenka Dhaqdhaqaaqa Xawaaraha Sare; Inta udhaxeysa labada tareen ee dhaqaaqaya, iki dhaqaajinta Platform yolcu waxay u ogolaaneysaa wareejinta rakaabka adigoon joogsi laheyn. Naqshadeeyayaasha wershaduhu waxay ku raraan rakaabka xawaaraha xawaaraha sare ee loo yaqaan "Priestmangoode" [More ...]